घरेलु मासु स्टक ट्याब्लेट (Avecrem® प्रकार) - थर्मोमिक्स रेसिपी | थर्मो रेसिपीहरू
आज म मेरो नवीनतम महान खोज प्रस्तुत गर्न चाहन्छु: घरेलु बुइलन ट्याब्लेटहरू (Avecrem® प्रकार)।
धेरै पटक हामी मासु स्टक ट्याब्लेट को लागी प्रयोग गर्दछौं स्वाद बढाउनुहोस् हाम्रो स्ट्यूहरू, स्ट्युहरू, सॉसहरू ... तर यो सत्य हो कि हामीलाई थाहा छैन तिनीहरू वास्तवमा के हुन् र उनीहरू कसरी बनेका छन्। ठिक छ, अब हामी तिनीहरूलाई आफैं बनाउन सक्दछौं, यस्तै धेरै स्वस्थ र सस्तो मासु ब्रोथ राखेर।
जब तपाइँ गर्नुहुन्छ, तपाइँले त्यो देख्नुहुनेछ बनावट यो हामीले किनेको औषधी जस्तो हुनेछैन, यो प्युरी जस्तै हुनेछ (यद्यपि यो तरकारी र हामीले प्रयोग गर्ने नूनमा निर्भर गर्दछ)। त्यसोभए हाम्रो ब्रोथको एक चम्मच कम्तिमा पनि हुन्छ, कम वा कम, एक खरिद गरिएको गोलीको लागि (यो द्रव को g०० ग्राम को लागी १ चम्मच हुनेछ)। थप रूपमा, यस बनावटलाई धन्यवाद, यो तातो तरल पदार्थमा द्रुत रूपमा विघटन गर्दछ।
मलाई यो नुस्खा मनपर्दछ किनकि हामी धेरै मात्रामा र बनाउन सक्छौं यसलाई राख राम्रोसँग बन्द जार भित्र 1 वर्षको लागि फ्रिजमा नुनको उच्च मात्राको कारणले गर्दा।
साथै त्यहाँ पनि छ शाकाहारी संस्करण, भरिएको तरकारी र मासु छैन।
त्यसोभए हामी तपाइँलाई यसलाई तयार गर्न प्रोत्साहन दिन्छौं किनभने तपाइँ यसलाई प्रयास गर्दा तपाइँ तयार गर्न मनपर्छ तपाईंको आफ्नै घरेलु चक्कीहरू।
1 घरेलु मासु स्टक ट्याब्लेट (Avecrem® प्रकार)
हाम्रो भान्सा मा एक आधारभूत र आवश्यक नुस्खा।
खाना पकाउने समय: 33M
कुल समय: 33M
दुब्ला मासु को 300 ग्राम (यो कुखुरा, गाईको मासु, सुँगुरको मासु हुनसक्दछ ...) नसहरु वा tendons बिना
300 ग्राम तरकारी (गाजर, अजवाइन, प्याज, लीक, टमाटर ...)
मोटा नुन को 300 ग्राम
हामीले मासुलाई सिसामा राख्यौं र काट्यौं Seconds० सेकेन्ड, गति 10। हामी फिर्ता र आरक्षित।
हामीले सबै तरकारीहरू राख्यौं र काट्यौं Seconds० सेकेन्ड, गति 10।
हामी नुन थप्दछौं, हामीले राखेका मासु, दाखमद्य, तेज पात र हामी कार्यक्रम १ minutes मिनेट, भेरोमा, गति १।
यस चरणमा, बीकर राख्नुको सट्टा, तरललाई वाष्पीकरण गर्न र यसलाई सकेसम्म बाक्लो बनाउनको लागि टोकरी हाल्ने छौं।
जब समय सकियो, हामी तापमानलाई थोरै (लगभग º०º सम्म) तल जान दिन्छौं, हामी गब्लेटको लागि टोकरी परिवर्तन गर्दछौं र कुचोल्दछौं। १ मिनेट, गति 1।
हामी यसलाई चिसो पार्दछौं र यसलाई फ्रिजमा जारमा भण्डार गर्दछौं।
यसलाई फ्रीजरमा जारमा पनि भण्डारण गर्न सकिन्छ। पास्ता जम्दैन र सजिलै प्रयोग गरिन्छ।
थप जानकारी - आधारभूत विधि: केन्द्रित तरकारी ब्रोथ ट्याब्लेटहरू
स्रोत - पुस्तक आवश्यक
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: CARNES, Celiac, सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, १ घण्टा भन्दा कम, सूप र क्रिम
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » सूप र क्रिम » घरेलु मासु स्टक ट्याब्लेट (Avecrem® प्रकार)
म तपाईंलाई यो मूल नुस्खा मा बधाई छ। यो प्रकारको रेसिपी पहिलो पटक देखेको छु। के मलाई शंका छ के यो साँच्चिकै बिरामी नभएको फ्रिजमा लामो समय सम्म रहन सक्छ।
म तिमीलाई धेरै मन पराउँछु। जो मानिसहरूले विधि पत्ता लगाएका छन् भन्छन कि यसमा मोटो नुनको उच्च मात्राको कारणले यसले यसलाई १ बर्ष सम्म उत्तम राख्दछ। तर मेरो मामलामा, किनकि म यसलाई अलि धेरै प्रयोग गर्छु, यो एक बर्षमा रहदैन। जे भए पनि, तपाईं जहिले पनि आधा रकम बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईं पहिले यसलाई खर्च गर्नुहुनेछ।
हो यो सबै समय हो, म प्रमाणित गर्छु। यो नुस्खा "अत्यावश्यक" पुस्तकमा छ जुन थर्मोमिक्सको साथ आउँछ, र मैले सुरुदेखि नै नुस्खा बनाएको छु, यो अद्भुत छ। म यसमा ल्वाङ्ग पनि थप्छु, र म सधैं तरकारीहरू बीचमा के राख्छु, लीक हो, किनभने यसले धेरै स्वाद दिन्छ।
विचार सधैं मांस, तरकारी र भद्दा नुनको समान वजन राख्नु हो। त्यो हो, यदि तपाईंसँग १ 140० ग्राम मासु छ भने, त्यसपछि १ vegetables० ग्राम तरकारी र १ grams० ग्राम मोटा नुन राख्नुहोस्। उत्कृष्ट !!!
तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद, यो जान्नु सधैं राम्रो हुन्छ कि एक नुस्खा राम्रोसँग बाहिर आउँदछ। मैले तिनीहरूलाई माछा र तरकारीहरू बनाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। अर्को पल्टमा लौंगहरू कोशिस गर्नेछु, यसले निश्चित रूपमा चाखलाग्दो स्पर्श दिन्छ।
ठीक छ, हामीले प्रयास गर्नुपर्नेछ! म प्राय: avecrem pills धेरै प्रयोग गर्दिन, तर क्युवाली चामल बनाउनको लागि, वा vichyssoise म गर्छु। र यसलाई स्थिर गर्न सकिदैन?
अब यो नुस्खाको साथ, तपाईं यसलाई नुनको साथ बदल्दै अन्य धेरै चीजहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले नुनका साथै तपाईंको भान्साको स्वाद बढाउँदछ। यो समावेश गरिएको नुनको उच्च मात्राको कारण यसलाई स्थिर गर्न सकिदैन, यो कहिल्यै स्थिर हुँदैन। तपाईं हामीलाई भन्नुहोस् यदि तपाईंलाई यो नयाँ आविष्कार मनपर्‍यो भने।
मलाई तपाईको ब्लग वास्तवमै मनपर्दछ कि व्यंजनहरू राम्रो हुन्, तर म तपाईलाई मधुमेह रोगीहरूको लागि केहि व्यञ्जनहरू दिन चाहान्छु तर मिठाईको मात्राको साथ विशेष गरी मिठाई सम्बन्धी मामलामा ... सम्भव छ।
पाउला www.mixthermorecetas.com भन्यो
म तिनीहरूलाई र माछा पनि प्रयोग गर्दछु your, यो तपाईंको भाँडा स्वाद गर्न एक राम्रो तरिका हो; र एक प्राकृतिक तरीकाले। अब म केहि तरकारी बनाउन चाहन्छु। अवश्य पनि, म तिनीहरूलाई फ्रिजरमा राख्छु; र तिनीहरू पूर्ण रूपमा स्थिर छैन भने, तिनीहरू धेरै कडा रहन।
Paula www.mixthermorecetas.com लाई जवाफ दिनुहोस्
अवश्य पनि, नुनको कारण उनीहरू स्थिर गर्दैनन्, तर यदि संरचना राम्रो छ भने, यो जान्न पनि रोचक हुन्छ। तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद!
घटना !! मलाई यो धेरै मनपर्‍यो, मलाई लाग्छ कि यो व्यावसायिक मासु ब्रोथ ट्याब्लेटको लागि राम्रो र बढी स्वस्थ विकल्प हो। अभिवादन
तिनीहरूलाई प्रयास गर्नुहोस्, तपाइँ पक्कै तिनीहरूलाई मनपर्नुहुनेछ। यस तरीकाले हामी औद्योगिक खानेकुरा खाँदैनौं ... हामीलाई उनीहरूले वास्तवमा के बोक्दछन् थाहा छैन। तपाईं हामीलाई यो मनपर्‍यो भने हामीलाई भन्नुहुनेछ!
कति चाखलाग्दो कुरा, सत्य यो हो कि मैले थर्मोमिक्स मैले गर्नुपर्ने जति प्रयोग गर्दिन। मसँग एउटा प्रश्न छ ... यो कसरी प्रयोग हुन्छ? यसलाई एक भाँडोमा हाल्नुहोस् र यसलाई स्पूनफुलको प्रयोग गर्नुहुन्छ?
मेरो अज्ञानतालाई माफ गर्नुहोस्, धन्यवाद, अभिवादन
Yaya लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार याया, वास्तवमै, म कसरी यसलाई प्रयोग गर्छु, सानो चम्मच एक गोली बराबर हुनेछ। तपाईं यसलाई आइस बाल्टिमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई स्थिर गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईं व्यक्तिगत ट्याब्लेटको रूपमा हुनुहुनेछ। तपाईं तिनीहरू कति उपयोगी देख्नुहुनेछ 🙂 र अज्ञानता केही पनि छैन, तपाईंलाई कसरी लाग्छ कि हामी बाँकी सुरु भयो? एक चुम्बन र हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद, यहाँ हामी तपाईंलाई के आवश्यक छ को लागी छौं।
नतालिया | परफ्यूम भन्यो
यस साधारण नुस्खाका लागि धन्यबाद, सत्य यो हो कि मैले नुनको समस्याको कारणले व्यावसायिक मासु पिलहरू प्रयोग गरिरहेको छु, मलाई लाग्छ कि हामी सबैले स्वस्थ हुन प्राकृतिक भोजन तयार गर्नुपर्दछ।
नतालियालाई जवाफ दिनुहोस् | परफ्यूम
तपाईं यी घर बनाउने गोली बढी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरू स्वस्थ छन्। अवश्य पनि, तपाईं आफ्नो भाँडामा गोलीको कम मात्रा थप्न सक्नुहुन्छ र यसरी नुनको मात्रा बढी नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। यो सत्य हो कि हामीले प्राकृतिक भोजन पुनः प्राप्त गर्नु पर्छ ... कहिलेकाँही जीवनको प्रकारको कारण हामी सजिलोसँग सहारा लिन्छौं, र धेरै पटक घरमा काम गर्न यत्तिको लामो समय लाग्दैन। तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद!
के कसैलाई माछा पकाउने तरीका बनाउने बारे थाहा छ? यदि एक र अन्य दुबैमा समान सामग्रीहरू छन्।
Pepa लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार पेपा, माछा मासु जत्तिकै उस्तै हुन्छ, तर माछाको लागि ग्रामको मासु प्रतिस्थापन गर्दै (माछा, हाके, समुद्री बास, समुद्री मदिरा, मंकफिश ...)। बाँकी सामग्री उही समान हुनेछ।
मी जोस भन्यो
शुभ रात्री, मलाई यो नुस्खा बनाउन प्रोत्साहित गरिएको छ, मैले सूपमा एक चम्मच राखेको छु र सत्य यो हो कि यसले तपाईंको पकाउने विधिहरूको लागि अर्को १० भन्दा पनि राम्रो स्वाद दिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद
म अन्ततः यो नुस्खा बनाउन प्रोत्साहित छु, मैले सूपमा एक चम्मच राखेको छु र यसले ठूलो स्वाद दिन्छ, जहिले पनि तपाईका व्यंजनहरुका लागि अरू १०
जवाफ जोस हुँ
नमस्ते एम जोस, तपाईले उनीहरूलाई बनाउनु भएको आनन्द र उनीहरू यति राम्रोसँग बाहिर निस्के !! म यो सुन्न धेरै खुसी छु। तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद!
जुआन जोसे भन्यो
नमस्कार तपाईको योगदानका लागि धन्यबाद।
कसैलाई तरकारी वा तरकारी ब्रोथ पिल कसरी बनाउने थाहा छ?
जुआन होसेलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते जुआन्जो, मैले कहिले पनि बाउलोन ट्याब्लेटहरू बनाएको छैन, तर मसँग गरिएको नुस्खा लगभग 800००- 900 ०० ग्राम सब्जी र grams०० ग्राम मोटा नुन राख्नु पर्छ, तर म तपाईंलाई आश्वासन दिन सक्दिन ... मलाई माफ गर्नुहोस्। यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने, यो महान हुनेछ यदि तपाइँ हामीलाई यसको बारेमा कसरी बताउन सक्नुहुन्छ, ठीक छ? धन्यवाद !!
म प्राय: ब्लगमा कहिले पनि टिप्पणी गर्दिन तर तपाईंको पृष्ठले मलाई बाध्य पार्‍यो, असाधारण काम।
साम्युएलालाई जवाफ दिनुहोस्
हेरौं कि मैले फेला पारे, त्यसो भए तपाईं भाँडा जति पटक चाहानुहुन्छ खोल्न र बन्द गर्न सक्नुहुन्छ र यो खराब हुँदैन?
मारीकिल्लालाई जवाफ दिनुहोस्
मारीकिल्ला, पक्कै पनि यो त्यस्तै हो। तपाईं बोतल खोल्नुहुन्छ र तपाईंलाई आवश्यक मात्रा थप्नुहुन्छ (सामान्यतया यो अधिकतम एक वा दुई ठूला चम्चाहरू हुनेछ), त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग चपटा गर्नुहोस् तपाईले लिनु भएको टेबलस्पून वा टेबलस्पूनले छोडेको अन्तरलाई ढाक्न, बोतल बन्द गर्नुहोस् र फेरि फ्रिजमा सिधा गर्नुहोस्। । यो तपाइँ कम्तिमा months महिनामा रहनेछ, नुन एक महान संरक्षक हो।
नमस्ते, यदि मसँग कुखुराको लास छ, के म यो प्रयोग गर्न सक्छु? म कल्पना गर्छु कि मैले त्यसलाई डालोमा हाल्नु पर्ने थियो, तर नुमाइलामा पानी नभएकोले यो धेरै प्रयोग हुने हो कि मलाई थाहा छैन। र यदि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ, के म त्यस्तै मात्रामा अन्य चीजहरू छोड्छु वा केहि मासु लिन्छु?
होइन, तपाईं कुखुराको लास प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, माफ गर्नुहोस्! यसलाई स्वादिष्ट स्टक वा कुखुराको ब्रोथ बनाउन राम्रोसँग बचत गर्नुहोस् (म तपाईंलाई स्टू ब्रथमा लि the्क छोड्दछु: http://www.thermorecetas.com/2011/02/19/receta-thermomix-caldo-de-puchero-con-gallina/)। ट्याब्लेटहरूमा हामीले सबै कुरा क्रश गर्न आवश्यक पर्दछ ... त्यसैले यहाँ शव बेकार छ। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
नमस्कार इरेन, तपाईले उपहार पाउनु भएकोमा धन्यवाद।
मैले पहिले एक टिप्पणीमा भनेझैं, सबै औद्योगिक स्टक केन्द्रित हुन्छन् (हर्बलिस्टहरूमा बेच्ने बाहेक) मा मोनोसोडियम ग्लुटामेट हुन्छ, जसलाई सामान्यतया "स्वाद वृद्धि गर्ने" भनिन्छ र तिनीहरू Avecrem, ह्याम, पनीरको स्वाद भएका आलुहरू बाहेक लिन्छन्। हुक्का, डोरिटोस ... र धेरै उत्पादनहरू जुन बच्चाहरूले खान्छन्।
यो धेरै विषाक्त छ, र यस कारणको लागि म एउटा लि leave्क छोड्न चाहन्छु, ताकि यस पृष्ठको माध्यमबाट यस्तो उत्कृष्ट रेसिपीहरू द्वारा, यसलाई स्वास्थ्य समस्याहरू र स्वस्थ र सन्तुलित खानाहरूमा चासो राख्ने कोही पनि पढ्न सकिन्छ।
म आशा गर्छु कि यसले तपाईलाई मद्दत गर्दछ !!!
खैर, पूर्ण रूपमा तरकारी ब्रोथ बनाउन, तपाईं 300gr लाई छोड्न सक्नुहुन्छ। अर्को vegetables०० तरकारीका लागि मासुको ??
जम्मा gr०० जीआर तरकारी र 600gr को। नुन को?
LUISA लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते लुइसा, तपाईको टिप्पणी को लागी धेरै धन्यवाद, यो धेरै जानकारीमूलक छ। तरकारी ब्रोथको लागि, म लगभग 700००-800०० ग्राम तरकारीहरू प्रति 300०० ग्राम मोटा नुन राख्छु, ताकि यो अत्यधिक नुन नहोस्। तपाईं मलाई भन्नुहुनेछ!
गोन्जालो माटेओस बेसेरो भन्यो
औद्योगिक गोलियाँको संरचना उही रहस्य हो कोका कोलाको सूत्रको रूपमा।
गोन्जालो माटेओस बेसेरोलाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो प्रश्न रक्सीको बारेमा छ। म यसलाई केटीहरूको लागि खाना बनाउन प्रयोग गर्दछु र मलाई थाहा छैन कि यो उनीहरूको लागि पिउन उपयुक्त छ कि छैन, यद्यपि यो एकदम थोरै देखिन्छ ... तपाईलाई केहि बच्चाहरूका लागि व्यंजनहरु हानिकारक हुन सक्छ कि केहि थाहा छ यदि उनीहरूसँग केही रक्सी छ भने? के यो दाखमद्य बिना नै गर्न सकिन्छ र यो उस्तै हुनेछ?
धन्यबाद र तपाईको ब्लग को लागी बधाई। यो मन पर्यो!
नमस्कार मारिया, तपाई यसलाई पूर्ण शान्तिको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ किनकि रक्सी, पकाउँदा, सबै रक्सीलाई वाष्पीकरण गर्दछ। जे भए पनि, तपाईको केटीहरु कति बर्षको छ? हुनसक्छ, यदि तिनीहरू साना छन् भने, बोउलोन ट्याब्लेटहरू प्रयोग गर्न सुविधाजनक छैन उनीहरूको उच्च नुन सामग्रीको कारण। हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद! Thermorecetas the को भान्साबाट ठूलो आलिंगन
र के्युबमा नुनको मात्रा र फ्रिज कम गर्न सम्भव छैन?
नमस्कार लोला, कुनै समस्या छैन, तपाईंसँग थोरै नुनको गोली हुनेछ र, यसकारण जब तपाईं तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ अधिक प्रयोग गर्नुपर्नेछ 🙂
नमस्ते, पुस्तकमा जुन थर्मामिक्सको साथ आउँदछ नुनको मात्रा आधा हो, १g० ग्राम।
सहि टेसेटा के हो?
बीट्रिजलाई जवाफ दिनुहोस्
मैले भर्खरै यो बनाएँ र म महल राख्न बिर्सियो। यो खपत भएको छ, कृपया, म यसलाई ठीक गर्न सक्छु
यो जरुरी छ
Ely लाई जवाफ दिनुहोस्
यस नुस्खामा मैले एउटा डाला राख्न बिर्सिए
र यसले मलाई भस्म पार्यो
म यसलाई ठीक गर्न सक्छु ???? यो जरुरी छ
नमस्ते! धन्यवाद! म एक नौसिखो हुँ र मसँग tm21 छ ... मैले बुझें कि तपाईले दिईएको निर्देशनहरू tm31 बाट आएको हो र मैले रूपान्तरण गर्नु पर्छ, हैन?
माफ गर्नुहोस् यदि प्रश्न स्पष्ट छ ... त्यसो भए सामान्य रूपमा तपाईको ब्ल्गको व्याख्या गरिएको छ tm31 सहि?
Lore लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते लोरे, तपाईंलाई के चाहिन्छ सोध्नुहोस् हामी सबै नयाँ बच्चाहरू भएका छौं र हामीले सोधेर सिकेका छौं !! त्यसोभए हामीलाई केहि सोध्न समस्या छैन। ठिक छ, यो ब्लग टीएम to१ मा केन्द्रित छ, त्यसैले यहाँ म तपाईंलाई यो पोस्ट छोडिदिन्छु जहाँ हामी सबै मोडेलहरूको बीचमा भिन्नता वर्णन गर्दछौं र जहाँ तपाईं समानताको साथ तालिका देख्नुहुनेछ ताकि तपाईं आफ्नो थर्मोमिक्स मोडेलमा कुनै पनी विधि अनुकूल गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ यसले तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छ !! यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने हामीलाई लेख्नुहोस्! हामीलाई अनुसरण गर्न को लागी धन्यवाद 🙂
Brie र यार्क हेम क्रोकेट्स